သင်၏အော်ဂဲနစ်အဆင့်သည်အရေးပါပါသလား။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 28, 2011 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 14, 2017 Douglas Karr
ငါ့ကိုအချို့ ruffle ဖို့အချိန် SEO ဆိုသည်မှာ နောက်တဖန်အမွေးများ ဒီကနေ့မှာကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များအား Google Search Console မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး၊ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုမှကျွန်ုပ်ရရှိသောလမ်းကြောင်းကိုတူးဆွသည်။ Martech Zone နံပါတ် ၁ များစွာနှင့်အပြိုင်အဆိုင်မြင့်မားသောအသံသော့ချက်စာလုံးများနှင့်နံပါတ် ၁ များစွာဖြင့်သော့ချက်စာလုံးများအတော်များများရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကြောင်းသိကြ၏ ရာထူးအဆင့်မြင့်လေလေ၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းမြင့်လေလေဖြစ်သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်။ သို့သော်ယင်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာတွင်အရေးပါသလော။
သင်၏စုစုပေါင်းအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းကိုသင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောသို့မဟုတ်ရှာဖွေမှုပမာဏနည်းသောသော့ချက်စာလုံးများမှမလျှော့ပါနှင့်။ ငါတို့အပေါ်မှာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ဂဲနစ်အသွားအလာ၏ ၇၂% သည် entries များမှလာသည် မပင်စာမျက်နှာ 1 ပေါ်မှာ! ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် 8 ရာထူးအဆင့်ထက် 1 ရာထူးအဆင့်မှပိုမိုအသွားအလာရရန်ဖြစ်သည်။
ဒီဟာကဘုရားသခင်ကိုစော်ကားတာလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဟာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုကြည့်နေရင်းသင်အမှန်တကယ်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ မြင့်မားသောအသံ၊ အပြိုင်အဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများပေါ်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပို၍ အရေးကြီးပါသလား။ ဤသည်အချိန်မီနှင့်စျေးကြီးနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်၊ သင်သည်အပြိုင်အဆိုင်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်အလွန်သက်ဆိုင်သောရှည်လျားသောအမြန်သော့ချက်စာလုံးများကိုအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးပေးရာတွင်အားစိုက်ထုတ်ရန်အချိန်ယူနိုင်သည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျနော်တို့ရွေးလိုက်တယ်။ အဆင့် ၁ ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာငါဟာစွမ်းအင်ကိုများများစားစားပိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်လာတယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းသည်သိသိသာသာများပြားလာသည်နှင့်သင် # 1 နေရာသို့ရောက်သောအခါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အသွားအလာမှာအရေးမကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများဖြင့်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဘာကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ရတာလဲ၊ bullseye အတွက်အချိန်မရွေးရိုက်ကူးမည့်အစားသက်ဆိုင်သောအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါလား။
သင့်ရဲ့အော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့အများစုဘယ်မှာလဲ အသွားအလာ ဘယ်ကလာတာလဲ တောင်မှပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်း, သင်၏အများစုဘယ်မှာပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဘယ်ကလဲ ငါထင်တာကတော့အမြီးရှည်၊ သက်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုအမျိုးမျိုးမှဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုမှားတာသက်သေပြပါ 🙂
ငါလုံးဝအပြိုင်အဆိုင်အသုံးအနှုန်းများအပေါ်အဆင့်မြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပယ်ချမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုများစွာပြသပြီး traffic များစွာမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အချို့သောသော့ချက်စာလုံးများပေါ်တွင်အဆင့်မြင့်ခြင်းသည်ဆက်စပ်သောသော့ချက်စာလုံးများစွာတွင်အဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပုံရသည်။ ပေါင်းစပ်မှုကတစ်တန်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ မျှမျှတတချဉ်းကပ်မှုကိုကျွန်တော်ထောက်ခံတာပါ။ at-bat တိုင်းနှင့် homerun ရရှိရန်ကြိုးစားမည့်အစား base ကိုရယူခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကောင်းပါသည်။
အပ်ဒိတ်: ဒီ post ကိုဝေမျှပြီးနောက်ငါကဒီသတိထားမိသူတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အသွားအလာ, အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ် Chase.
Tags: CTRgoogle အဆင့်+ googlekeyword အဆင့်အမြီးရှည်longtail သော့ချက်စာလုံးများPageRankအဆင့်serp
28:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 59 တွင်
ဒါကတကယ့်အကောင်း post ကို Doug ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားတွေလိမ်တယ်၊ အမျိုးသမီးတွေလိမ်တယ်၊ နံပါတ်ကမလုပ်ဘူး။ ဒီတော့မင်းရဲ့နံပါတ်တွေအရမင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ငါပြောတယ် - ပိုအရေးကြီးတာကတော့စားသုံးသူနဲ့မဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဒီချဉ်းကပ်မှုကိုစဉ်းစားသင့်တယ်။ ငါလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းမှာစုံတွဲတစ်တွဲရက်အနည်းငယ်ရုံးထဲဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်။ ငါဒါလေးကိုပိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာချင်တယ်။ (PS: ငါ teamtreehouse.com ကိုလေ့လာရန် ၂ ပတ်ကြာသည်။ အချို့သူများသည်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်ရေးရန်သင်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ မစ္စတာကောလီအားအသိပေးပါ။ သူထွက်သွားပါလိမ့်မည်! HA
ဒီဇင်ဘာ 29, 2011 မှာ 8: 03 AM
ဆက်စပ်သောသော့ချက်စာလုံးများအပေါ်အာဏာနှင့်သက်ရောက်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂူဂဲလ်ဝက်ဘ်မာစတာကိရိယာများသည်အဆင့် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော့ချက်စာလုံး ၁၀၀၀) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖော်ပြသည်ကိုသတိရပါ။
29:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 39 တွင်
ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ကောင်းစွာနှင့်အတူချိတ်ဆက် adwords ရှိသနည်း တနည်းအားဖြင့်သင် adwords မှငွေပေးချေမှုရခဲ့ကြနှင့်အော်ဂဲနစ်စာရင်းမြင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ adwords သူတို့မြင်နိုင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်စာရင်းဖြစ်တဲ့အခါပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ထင်ပါတယ်။ လူတွေကရွေးချယ်လိုက်သောရွေးချယ်မှုအရ (အခြားတစ်ခုမြင်နိုင်သည့်အခါ) ၎င်းသည် adwords များကို traffic source ဖြစ်စေပြီးနံပါတ်များသည်အော်ဂဲနစ်ကိုအရေးမကြီးဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာ CTR များသည်ထိုအော်ဂဲနစ်နေရာချထားမှုများမရှိလျှင်နိမ့်ကျလိမ့်မည်။
29:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 49 တွင်
@ktatgenhorst: Nope disqus, ငါတို့အသွားအလာရရှိရန်ငွေပေးချေမှုမရှာဖွေပါ။
30:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 52 တွင်
Doug၊ မင်းရဲ့နောက်ဆုံးအကြံဥာဏ်၊ ယာဉ်ကြောကိုမလိုက်ဖို့၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမဟုတ်ဘဲလူအများစုမလိုက်နာသောအတိအကျဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာငါထင်တာကတော့အဆင့်မြင့်လွယ်ကူတယ်၊ အသွားအလာခက်ခဲတယ်၊ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်မယ်၊ ကြော်ငြာကလစ်၊
Tod Hirsch က
မတ်လ 12, 2012 မှာ 2: 31 pm တွင်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီ post ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးအတွက်သင့်ရဲ့ SERP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ သင်၏ရပ်တည်ချက်သည် Google SERP စိတ်ကြိုက်ပြုခြင်းသည်ဂူးဂဲလ်၏“ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်” နှင့်သက်ဆိုင်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါက၊ ဤလေ့လာမှုအတွက်မည်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်အသုံးပြုမည်နည်း။ တစ်နည်းပြောရရင်မင်းရဲ့လမ်းကြောင်း ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းဟာသင်ဟာ Google SERPs ရဲ့ပထမစာမျက်နှာမှာတောင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေကလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုနေတယ်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် Google SERPs ကဘယ်သူတွေလဲ။ * တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒီသော့ချက်စာလုံးတွေအတွက်မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုရှာဖွေနေတာဟုတ်သလား။ သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းသည်စာမျက်နှာ ၂.၃၊၄ စသည်တို့ကို Google SERPs စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဒီတော့သူတို့အတွက်တော့၊ မင်းကပထမစာမျက်နှာမှာအဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်၊ မဟုတ်ရင်မင်းပြောနေတာတွေကမင်းကိုရှာမှာမဟုတ်ဘူး။
မတ်လ 12, 2012 မှာ 2: 36 pm တွင်
တကယ်တော့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ရရှိသောရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းအများစုသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမစာမျက်နှာတွင်နေရာချထားခြင်းမှမဟုတ်ပါ။ ကျနော့်အချက်ကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကအရေးမကြီးဘူး။ ကျနော့်အချက်ကတော့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက်သက်ဆိုင်မှုကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါ။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုအဓိကထားပြီးကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကိုရေးပါကလူများသည်သင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ရာထူး၏။
ငါတို့ဖောက်သည်တွေနဲ့လည်းတွေ့နေရတယ်။ မြင့်မားသောအသံ၊ အဆင့်မြင့်သောသော့ချက်စာလုံးများသည်အသွားအလာအချို့ကိုမောင်းနှင်နေသော်လည်းပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ အပြောင်းအလဲများသည်အလွန်သင့်လျော်သောစာမျက်နှာများမှလာသည်။ ရှည်လျားသောအမြန်သော့ချက်စာလုံးများမှပို့စ်များသည်ပထမစာမျက်နှာပြင်ပရှိ SERP နေရာမှဖြစ်သည်။ တနည်းကား, ရာထူးကျော်ဆက်စပ်မှု။
မတ်လ 12, 2012 မှာ 3: 06 pm တွင်
Doug၊ သင်၏ဆောင်းပါးသည်သင်၏ပို့လွှတ်မှု၏ ၇၂% သည် SERPs ၏စာမျက်နှာ 72 တွင်သင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောမေးမြန်းမှုများမှလာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအလွန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းသည် SERP စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သောခေတ်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသဘောတရားနှင့်ပတ်သက်သည်။ သင်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်း၏ ၇၂% သည်သင့်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်တွေ့ရှိသည်။ သင်သည်ထိုမေးမြန်းချက်များအတွက်စာမျက်နှာ 1 တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မရရှိလျှင်သူတို့သည်သင့်ကိုမည်သို့ရှာတွေ့နိုင်သနည်း။ SERP ၏စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်လူတိုင်း၏စာမျက်နှာ 72 သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသလော။
မတ်လ 12, 2012 မှာ 3: 16 pm တွင်
အတိုင်းအတာအထိ ... ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့သည်ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေမှုမှလည်ပတ်မှု၏ထက်ဝက်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေမှုမဟုတ်ပါ။ ဤအချက်အလက်များကို Webmasters မှရရှိသည်။ ဤသည်မှာလွန်ခဲ့သောစာမျက်နှာ ၁ ကို နှိပ်၍ RELEVANT ရလဒ်ကိုရှာနေသောလူများဖြစ်သည်။
မတ်လ 12, 2012 မှာ 10: 40 pm တွင်
လူတွေဟာသူတို့လိုချင်တာကိုစာမျက်နှာ 1 မှာရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်စာမျက်နှာ ၂ ကိုသွားမယ့်အစား၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းနဲ့မေးမြန်းကြတာပါပဲ။ အမြဲတမ်းကျွန်တော်အမြဲထင်မြင်ယူဆမိတယ် တကယ်တော့ဒါကငါအမြဲတမ်းလုပ်နေတာပဲ သင်ပြောနေသည့်အရာမှန်လျှင်လူများ၏ရှာဖွေမှုသည်အတော်လေးပြောင်းလဲသွားသည်။
မတ်လ 14, 2012 မှာ 12: 14 AM
Tod - ဒါကငါရှာဖွေမှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာသေချာတယ်။ သို့သော်အခြားလူများမည်သို့ရှာဖွေသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်သွားသည်။ ဥပမာ - များစွာသော၊ များစွာသော၊ ဝါကျများတစ်ခုလုံးကိုသော့ချက်စာလုံးအနည်းငယ်လောက်သာမဟုတ်ဘဲရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များထဲသို့ထည့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တစ်ကြိမ်ရှာဖွေမှုများကိုဖမ်းယူသောမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူသိလဲ?!
ဘီလ် _ ဝီလ်ဆင် ၃၄
မတ်လ 12, 2012 မှာ 5: 16 pm တွင်
Doug ငါဆောင်းပါးတကယ်ကိုကြိုက်တယ် အကြှနျုပျ၏ဂါထာအမြဲဖောက်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်သင်၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်သက်ပါကသူတို့သည်သင့်ကိုအမြဲတွေ့လိမ့်မည်။
မတ်လ 14, 2012 မှာ 12: 46 AM
ကျွန်ုပ်၏အသွားအလာအများစုမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကရေးသားခဲ့သည့်တိုင်တိုင်များမှလာသည်။ အမြီးရှည်ကတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပုံမှန်စီးဆင်းမှုကိုပေးသည်။ “ မှတ်တိုင်တိုင်” ဟူသောဝေါဟာရသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအလွဲသုံးစားပြုခံခဲ့ရသည်။ ငါ“ တိုင်တိုင်” ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ site နယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးရပ်ရွာလူထုအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသော bonafied မူရင်းအကြောင်းအရာကိုရေးသားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အချို့သူများကဲ့သို့အကြောင်းအရာ curating ရုံ။ ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ခြင်းကကျွန်ုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်အခွင့်အာဏာအနေဖြင့် Googebot နဲ့ပြသခဲ့သည်။
ကောင်းသော post ကို Doug ။
မတ်လ 14, 2012 မှာ 1: 58 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @blogbloke: disqus! ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ထံမှချီးမွမ်းရသည့်အတွက်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်။ 🙂